10 Uninzi lweeNdwendwe eziFunayo | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Uninzi lweeNdwendwe eziFunayo
Ezothando, inika umdla, kunxweme lwase-Itali, kwiiAlps zaseFrance ngaphandle komnyango, okanye kwenye indawo e-China, ezi ziphezulu 10 wayefuna izibini zokuhamba ziya kukothusa.
1. Olona hambo lufuna kakhulu izibini: Ikhefu lesiXeko saseRoma eParis
Ngokukhuthazwa kwezona bhanyabhanya zothando, IParis yeyona ndawo isithandwayo kuhambo lwesibini esiseHollywood. Esona sixeko sithandanayo, kwaye yenye yezona zihambileyo ehlabathini, isekhona kwaye ihlala iyindawo ekufunwa kuyo kakhulu kwizibini ezitshatileyo.
Ukuba unomdla kuyo yonke into yesiFrentshi, patisserie, Izitiya zaseFrance, nezitrato ezinomtsalane, ke ukuqhekeka komzi eParis ilungele wena. Ngaphezu, uhambo lothando oluya eParis yeyona ndawo ifunwa kakhulu kwisibini esithanda ukuntywila, kunye nokuphila la vie en rose.
2. Uninzi lwabantu abathandayo uhambo oluya e-Itali: Truck Coast
Food, breathtaking iimboniselo, nolwandle, yenza unxweme lweAmalfi yenye yezona ndawo zifunwa kakhulu kukuhamba kwezibini. Izindlu ezimibalabala emaweni, iindlela ezijijekayo, nolwandle ecaleni kwakho, zonke izinto ozifunayo kwizibini ezithandekayo’ iholide.
Unxweme lweAmalfi yi 50 Iikhilomitha zonxweme lweendlela ezintle, esimhlophe, kunye neendawo zokulala ezifihlakeleyo ezineembono ezingalibalekiyo. Unokuhamba ngeenqanawa, okanye ukuhlamba ilanga, ukupheka, okanye yokutyela kwenye zokutyela emangalisayo ngaselwandle. Izinketho kwi-Amalfi Coast azipheli, nkqu nakwiidolophu ezincinci ezingaselunxwemeni lwase-Itali, khetha nje ukhetho lwakho!
3. Isiqithi saseSkye, Scotland
Ngamawa aphefumlayo, umbono obukekayo, kunye nenkcubeko enomdla, IScotland yenye yezona ndawo zibalaseleyo ehlabathini. Isiqithi saseSkye yenye yeengingqi ezintle ngokumangalisayo eScotland, kwaye uya kudinga ubuncinci 2 iiveki ukonwabela ubuhle bayo.
Nokuba ufuna ukuncoma umbono, okanye uyifumane ngeenyawo kwenye Iindlela ezininzi zokunyuka intaba, Isle of Skye ngummangaliso wendalo. Umzekelo, ukuba usisibini esithandekayo, ke uya kuthanda ukufumanisa ukwakheka kwejoloji Ukuqhawula. Kwelinye icala, unokuba nexesha lokuthandana echibini leFairy, okanye undwendwele inqaba yaseDunvegan kunye negadi.
Ngamanye amazwi, i-Isle of Skye yindawo emangazayo kuhambo lwezibini, Ndiyabulela kwiindawo ezintle zaseScotland, Izihlambo, kunye nonxweme olumangalisayo. Apha, benikwazi ukuhamba nibambene ngezandla, Yonwabeleni i-adventure kunye.
4. Ezona zibini zifunwayo kukukhwela intaba e Switzerland
Ngeencopho ezinekhephu, amadlelo aluhlaza, kunye neembono ezintle ezibonakala ngathi zipeyinti, ISwitzerland yindawo emangazayo yokuya kwizibini ezitshatileyo. Ezona zibini zifunwayo eSwitzerland ziZermatt, I-Rhine Falls, kunye ne-Lauterbrunnen intlambo. Ukuba uyayithanda ihambo ngoko iZermatt yindawo efanelekileyo yokuskiya kuwe, kwaye ukuba ufuna ukuphumla kwisimo esihle, ke intlambo yaseLauterbrunnen ilungile.
ISwitzerland inezibini ezingapheliyo zokuya kwiindawo, ke kuxhomekeke kwiinjongo zakho zokubaleka kwezothando. Ngolunye uhlobo, uya kufumana iindawo ezininzi zothando, kwikhefu lesibini lomtshato, okanye kungenxa yokuba nifuna ukukhathalelana, kumsitho okhethekileyo. ngoko ke, it is really recommended to plan at least 7 uhambo losuku oluya eSwitzerland.
5. Venice, ElamaTaliyane
Ukutya okumnandi kakhulu, Umoya omangalisayo, kunye neendawo ezininzi zothando ezifihliweyo. Uhambo oluya eVenice luluhlu lwamabhakethi azo zonke izibini. Inani labakhenkethi abahamba besiya eVenice minyaka le libalaseleyo, nangona kunjalo, ubuhle bayo nobuhle bayo buya kuthimba kuwe ngalo lonke ixesha. Inyaniso, inomtsalane kakhulu, ukuba awuyi kuqaphela wonke umntu, kwaye ube nexesha elimangalisayo ekubalekeni kwakho kwezothando.
Uhambo oluya eVenice lolunye oluphezulu 5 ezona zibini zifunwayo kuba zilungele impelaveki emfutshane. Kukho izinto ezininzi esixekweni, Ukutya kwaseNtaliyane, kunye neendawo zokuhlala ezintle, ke uyakufumana iparadesi kwi-gondola. kunjalo, ukuba unqwenela ukubaleka uze ufumane ubuncwane baseTaliyane baseVenice, ungaya kwenye kwezininzi uhambo losuku oluvela eVenice.
6. Uninzi lweZibini eziFunwayo zokuHamba ngeeholide: IiAlps zaseFrance
Ukuthambisa yenye yeendlela ezishushu zokuhamba eYurophu, kudityaniswe neAlps zaseFrance, kwaye unezibini ezithandanayo’ uhambo. Olu hlobo lweenkampu luthambekele ngakumbi kwaye lubutofotofo kunokhetho olusisiseko lwentente. Misela kwindalo yasendle kwaye intle, ngeembono ezimangalisayo zeAlps zaseFrance.
Ukuxinana kwindawo yakho yangasese yangasese, ndlwana opholileyo, ukuvuka kweentaka ziyacula, ukufumana ikofu, kwaye uhamba ngokuthe ngqo ukusuka emnyango – ukuthandana intsomi. Xa indlwane yakho yothando ixhotyiswe ngokupheleleyo, nakwiindawo ezintle, awudingi enye into ngeholide yothando engalibalekiyo.
7. Amsterdam: Ukuphumla kweholide yasendlini
IAmsterdam sesinye sezixeko ezimnandi eYurophu kwizibini ezitshatileyo, kunye nokuhlala ngephenyane lendlu lolona thando lukhulu eAmsterdam. Iiphenyane zendlu yenye yeempawu zeAmsterdam, simiswe ecaleni kwemijelo. kunjalo, nje ukuba ungenelele, uyakuyifumana ipholile, olusondeleyo, kwaye ikhuselwe sisihlwele esincoma imijelo.
Ngaphandle kothandabuza, Iimpawu zeAmsterdam, emoyeni, isiko, kunye nobuhle buchukumisa izibini ezivela kwihlabathi liphela. Ngaphezu, ukujonga isixeko kunye nomlambo, ikofu ngaphandle kwefestile yakho, ukubaleka kwakho kwezothando kuyakuba kuphupha.
Iimarike ezinkulu zokutya, Umtsalane Notting Hill, Kensington Gardens, Uhambo oluya eLondon luhambo olungalibalekiyo. Isixeko sibonelela ngemisebenzi emininzi, ke unokucinga ukuba kuninzi kakhulu malunga nokubaleka kwezothando.
ngoko ke, kufanelekile ukuba wenze uphando, ukusuka kwindawo efanelekileyo, kunye nezinto ofuna ngokwenene ukuzenza. Ngamanye amazwi, Dibanisa uluhlu lweentengiso kunye nezinto onomdla zokundwendwela. Ukwengeza, shiya ixesha elininzi lokutya kwi-cocktails kuninzi Imivalo yophahla. Undoqo wohambo kukubuyisa uthando kwaye uqhushumbe kunye.
9. Uninzi lwabafazi abafuna uhambo e-Itali: Uhambo lweWayini eTuscany
izidiliya, iinduli eziluhlaza eziluhlaza, yaye Ukutya kwaseNtaliyane, uhambo oluya e-Italiya ikomkhulu lewayini kuluhlu lwebhakethi lwesibini ngasinye. Ukuhambahamba phakathi kwezidiliya, ukurhabula kwiwayini yakho ebomvu, kunye nokuzonwabisa kwimeko yoxolo, Ngokuqinisekileyo uya kuvuma ukuba iTuscany izandi zivela kuThixo.
Kanjalo, I-Tuscany yenye yezibini eziphambili zokuya kwiindawo rhoqo ngonyaka. Iimbono zomlingo newayini zithimba izibini ezivela kwihlabathi liphela, ukubenza babuye minyaka le.
10. Uninzi lwabantu abathandayo abahamba eTshayina: Umlambo waseYulong
I-China yindawo enomdla, kunye noMlambo iYulong yenye yezona ndawo zintle kwaye zinomdla. Umlambo iYulong uyinxalenye yoMlambo iLi, inde kwaye ayinasiphelo, ingqongwe ngamasimi aluhlaza, emizaneni, namasimi erayisi. Ngaloo ndlela, Ukuya kwi-adventure ecaleni koMlambo iYulong ngamava omlingo.
Ukongeza kwifayile ye- ubuhle bendalo, i Umlambo waseYulong likhaya kwiilali ezininzi nakubantu bohlanga. Ngaloo ndlela, Uya kuba nethuba elinqabileyo lokufunda malunga nendlela yobomi kwindawo yaseYangshuo, isiko, kanye art, njengokuba kuye kwenzeka kwiinkulungwane zeminyaka.
Apha Gcina A Isitimela, singavuya ukukunceda ucwangcise enye yezi 10 uninzi lwabantu abathandwayo abahamba ngololiwe.
Ngaba uyafuna ukufaka iposti yethu yebhlog "I-10 yeehambo ezihamba phambili zezibini" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Fmost-wanted-couples-trips%2F - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#romance izibini CouplesTrips RomanticCities RomanticEurope RomanticTrips RomanticViews